Maamulka gobalka iyo hey’adaha amniga oo la wadaagay shacabka khasaarihii ka dhashay roobabkii da’ay. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Maamulka gobalka iyo hey’adaha amniga oo la wadaagay shacabka khasaarihii...
Maamulka gobalka iyo hey’adaha amniga oo la wadaagay shacabka khasaarihii ka dhashay roobabkii da’ay.
Muqdisho, 20 Maajo 2018 – Duqa Muqdisho Ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa ka warbixiey xaaladda saameynta roobabkii xalay ilaa iyo maanta ka da’ayey caasimadda Muqdisho.
Duqa Muqdisho oo warsaxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa ayaa yiri “Roobabkii ka da’ayey caasimadda tan iyo xalay oo ahaa nimco rabbaani ah ayaa saameyn ku yeeshay naf iyo maalba. Maamulka Gobolka Banaadir ayaa tan iyo xalay waday gurmad oo dadkii saameynta ku yeelatay la geeyey goobo isla markaasna loo diyaariyey raashin iyo hooy.”
Ugu danbeyntii Guddoomiye Yarisow ayaa shacabka ugu mahadceliyey doorkooda ku aadan gurmadka kana codsaday in dadka tabaaleysan loo gurmado
Previous articleSafaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika oo deeq gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool dalkaasi
Next articleBeesha caalamka iyo guddiga gurmadka fatahaadyada oo Muqdisho ku wada hadlay